घरको आयु कति ? कसरी बन्छ सुरक्षित घर ? – jagritikhabar.com
कतारमा आफ्नै साथीले चक्कु हानेर नेपाली युवकको हत्या !
२० मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको लागि कतार पुगेका रोल्पाका एक युवकको हत्या भएको...
मलेशियामा नेपाली कामदारलाई कम्पनीले जबरजस्ती यस्तो गर्न थाले पछि !
एजेन्सी। भारतको राजधानीनयाँ दिल्लीबाट अमेरिकाको नेवार्क सहरका लागि उडेको विमान पुन: नयाँ दिल्ली फर्किएको...
मलेशिया स्वस्थ मन्त्री खैरी जमालुद्दीनले ओमिक्रोन पत्ता लगाएपछि यस्तो भनेका छन !
मलेशियामा कोरोना महामारीः आज मात्रै कोभिड-१९ बाट ४७ जनाको मृत्यु !
मलेशियामा तेस्रो खोप अथवा (बूस्टर शट) अब १८ वर्ष माथिका लागि दर्ता खुला भएको छ !